अर्थ Archives - Janakhabar
आन्तरिक विमानस्थलबाट १ अर्ब ७० करोड बक्यौता असुल गर्न बाँकी !
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरूबाट मात्रै करिव एक अर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको पाइएको छ । संघीय संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा नागरिक उडड्यनसम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरूबाटै सो बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको हो ।उपसमितिका संयोजक दिव्यमणि राजभण्डारीले विदेशी […]
सामाजिक सुरक्षाभत्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको गोजीमा !
काठमाडौं । खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलमा सामाजिक सुरक्षाभत्तामा अनियमितता भएको तथ्य बाहिर आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ देखी २०७६/७७ आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाभत्तामा अनियमितता भएको देखिएको हो । सामाजिक सुरक्षाभत्तामा व्यापक अनियमितता भएको गोप्य सूचना आएपछि सत्यतथ्य बुझ्न वडामा गएर सूचना माग्दा सूचना दिनै आलटाल गरिएको थियो । सूचनाको हक सम्बन्धी […]
प्रि बजेटमाथि छलफल हुदै
काठमाडौं । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलका लागि जेठ ४ र ५ गतेको दिन तोकिएको छ ।प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको, “आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्”, भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले […]
काठमाडौं । संखुवासभास्थित अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सोमबार नेपाल र भारतबीच संझौता भएको छ । बुद्ध जयन्तीका अवसरमा १ दिने नेपाल भ्रमणमा आज लुम्बिनी आउनु भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा अरुण–४ संयूक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम […]
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलवाट व्यावसायिक उडान सुरु
काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलवाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सुरु भएको छ । कुवेतबाट आएको जजिराको जेजेड आर ५४५ एयरवस ए ३२०–२३३ विमानले सोमबार बिहान ७ बजे १७४ यात्रु लिएर उडान भरेको हो । विमानस्थलको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका छन् । यसअघि बुधबार भारतको दिल्लीबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानको रुपमा भारतीय सेनाले उडान गरेको थियो । सो […]
आयकरको सीमा बढाउन सुझाव
काठमाडौं । राजश्व परामर्श समितिले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी बजेट २०७९/८० का लागि राजश्व प्रतिवेदन पेश गर्दै आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि पनि जोड दिएको हो । समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । समितिले करको दायरा विस्तार, आन्तरिक राजस्व वृद्धि […]
पेट्रोल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ !
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ ।
अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणालीको कारोबार समय परिवर्तन
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बाट सञ्चालित विद्युतीय चेक क्लियरिङ प्रणाली र अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणालीको कारोबार समय परिवर्तन भएको छ । जेठबाट शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक बिदालाई समेत मध्यनजर गर्दै एनसीएचएलले सो प्रणाली शुक्रबार समेत पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहने जनाएको छ । संशोधित तथा थप नयाँ सर्तहरूको व्यवस्था जेठ ३ गतेदेखि लागु हुने […]
निक्षेप संकलन बढ्यो !
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैशाख २६ गते निक्षेप ५ अर्बले बढेर ४९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ । बैशाख २४ गते बैंकहरूको निक्षेप ४९ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ रहेको थियो। यस्तै, बैशाख २४ गते ४३ खर्ब ७३ अर्व रुपैयाँ रहेको बाणिज्य बैंकको निक्षेप २ अर्वले बढेर ४३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ […]
रिभर फल्स पावरको आईपीओ खुला
काठमाडौं । रिभर फल्स पावर लिमिटेडले आजदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयमा आईपीओ बिक्री गरी वैशाख १९ गते बाँडफाँट गरिसकेको कम्पनीले बुधबारदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको हो । कर्मचारीसहित सर्वसाधारणमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरको २७ लाख ३० हजार कित्ता शेयर विक्री गर्ने तयारी […]